Wonke amantombazane kusukela ekuphupheni kwasebuntwaneni othandweni lweqiniso kanye nezikhulu ezinhle. Kodwa ngeshwa, izwe langempela livame ukubhubhisa la maphupho. Futhi ekugcineni, abesifazane bayeke ukukholelwa ezikhulwini, ezindabeni zamathekisthi nangothando. Kodwa njengoba wazi, yonke imicabango yethu nemizwa yethu igcizelela. Ngakho-ke, uma ungakholelwa othandweni, ke-ke, cishe, awukwazi ukuyihlangabeza. Ngakho yini okufanele ukwenze nokuthi ungakholelwa kanjani othandweni?
Amantombazane amaningi azama ukubukela amabhayisikobho othandanayo, okwenzeka nje efreyini ngesizathu esithile kunokubenza bakholwe i-vromantiku, ecasulayo nje. Kulokhu akukho lutho olumangalisa, ngaphezu kwakho konke, ifilimu enkulu yothando, okungabonakali okubonakalayo, futhi abalingiswa basuke bengafani. Ngakho-ke, ukuze ukholelwe othandweni, akudingeki ubheke okuthile ezweni lefantasy. Kubalulekile ukubona othandweni ezweni langempela.
Yonke intombazane inesifiso sayo somuntu. Futhi asikhulumi ngezindaba eziqanjiwe ezivela ezincwadini namafilimu, kodwa ngabantu abangempela. Kungaba umzalwane, ubaba, umkhulu, umalume, umngane omkhulu. Ngokuvamile, umuntu omethembayo, lowo omthandayo, cabanga okuhle kakhulu, njalo njalo. Kulo mfana namantombazane baqala ukuqhathanisa bonke abanye abantu. Futhi izikhathi eziningana zidumazekile kubafana, ubulili obuhle buvele bukholelwe ukuthi into enhle njengomuntu wabo oseduze ayikho nje, ngakho-ke kungcono ukuba ube munye kakade. Ikakhulukazi, uma usuvele usuthandweni, ngisho noma kungenjalo ngendlela oyifunayo.
Kule nkinga, iphutha lesifazane likhona ukuthi siqala ukubona abathandekayo bethu futhi sibheke ezinye iziphambeko zabanye kwabanye. Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi bonke abantu banezinzuzo zabo kanye nezidakamizwa. Kodwa ngesizathu esithile asifuni ukuwabona i-vnashih native, kodwa kubantu abangabazi sibona kazhdymyloch. Ukukhethwa okunjalo kuvela emva kokuba abesifazane bewela ezandleni zabantu abaphula izinhliziyo zabo, baziphathe ngendlela engafanelekile njalo njalo. Eqinisweni, ukusesha okunjalo kuyo yonke ilungu lobulili obunamandla luhlobo lokucindezeleka emva kokudumala ngemuva kokungajabuli uthando. Futhi lokhu kufanele kulwa. Ukuxabana kwe-Av kungasiza logical elementary. Njalo uma uthola isibonakaliso esincane, qhathanisa ne-minuses yomfowenu (ubaba, umalume, umngane). Ungayithethelela yini othandekayo wakho ngalokhu okushiwo? Uma kunjalo, khona-ke insizwa engase ibe yinto engalungile. Isibonelo, ubona ukuthi umfana usithulile. Ngokushesha uqala ukucabanga ukuthi akamane nje akhathalele ukuthi uyisiphukuphuku, engathandeki futhi awutholi lutho ngaye. Kodwa uma umfowenu engakuthandi ukukhuluma, khona-ke kulesi simo uyazikhumbuza ukuthi ngendlela enjalo, ngisho noma engathuli, uyakuthanda, ivele iboniswe ngenye indlela. Kalula nje, unikeza uhlobo oluthile lokuzijabulisa komuntu osondelene naye, futhi ngokuphambene nalokho, uphinde ulahlwe lowo muntu ongaziwayo. Nakuba ungamazi nhlobo.
Ngendlela, enye inkinga kulabo besifazane abangakwazi ukukholelwa othandweni ukuthi abafuni nje ukwazi abantu. Umqondo wokuqala ovame ukuvame ukukhohlisa. Yingakho, ukulinganisa insizwa emaminithini emihlanu yokuqala, owesifazane uthatha isinqumo sokuthi akahlangene naye futhi uyeka ukumbona esoka lakhe. Isifiso esinjalo sokuhlola ngokushesha konke ngenxa yokuthi amantombazane asaba ukusondelana. Abesifazane abaningi, beqala ukungena emphefumulweni wendodana encane, banamathele kuwo, bethola kuwo, bacabanga, into ekhethekile. Futhi-ke kuvela ukuthi bazitholile ngokwabo. Futhi ukuze angahambi esigabeni esifanayo, abesifazane ngokuvamile abazami ukufunda umphefumulo womuntu. Ngeke ukwazi ukwenza lokhu ngokuyinhloko, ngoba uma uhlala uphazamisa wonke umuntu, ngeke ubone umuntu ovele ekuthandayo kakade, kodwa akakwazi ukusho lokhu, ebona ukuthi ukhuthazela kanjani kubo bonke abamele abesilisa.
Ukuze uphinde ufunde ukukhuluma nabantu, thola indawo eyodwa. Ukuqapha ebuhlotsheni nokuyeka ngokuphelele kuhluke ngokuphelele. Ngakho-ke, uma ufuna ukukholelwa othandweni, zama ukukholelwa kubantu kancane. Ukuxhumana namadoda, ayeke kubo ukufuna into enhle noma into embi. Qaphela konke, ukuthembela kuphela emqondweni ovamile. Uma umuntu enza okuthile, uthi okuthile, wenza ukukhetha okuqondile, nje ubukele futhi uhlaziye. Hlola, futhi ungaphuthelwa ngokwakho, ugcwalise zonke izenzo ngemizwelo yakho. Khona-ke ungakwazi ukuqonda ngokucacile uhlobo luni lwabantu okufanele lukulindele kulo. Akudingeki ukuba uhlulele umuntu ngokubuka kuqala. Ngisho noma ephuzile futhi engahlali, lokhu akusho ukuthi umuntu uziphatha ngale ndlela ngaso sonke isikhathi. Noma mhlawumbe wadakwa okokuqala empilweni yakhe ngenxa yomjovo wesifo esibucayi. Awazi lokhu futhi ngeke wazi ukuthi uma usususa ngokushesha.
Yazi uthando lwakho
Ukuze ukholwe othandweni, udinga ukukubona. Abaningi, badumala imizwa yabo, bayeka ukubona uthando phakathi kwabanye. Futhi lokhu akulungile. Noma kunjalo, kukhona uthando. Yebo, kuletha kubantu nokukhungatheka, futhi ubuhlungu, kodwa kukhona uthando lweqiniso olwenzela wena ukumomotheka futhi ujabulele ukuphila. Kodwa uma lona wesifazane edumazekile, uzimisele ukugxeka umbhangqwana ngamunye, futhi ngokulinganayo isigamu sesilisa bese uthole ukuhluleka kwamaphutha ekuziphatheni kwamadoda. Awudingi ukunyathela. Eqinisweni, phakathi kwabahlobo bakho noma izihlobo zakho kuzohlale kukhona abantu abathandana ngempela futhi balungele ukunikela impilo yabo ngesigamu sabo. Lokho akudingekile ukuba kulungiswe lolu thando futhi ucabange ukuthi lo mbhangqwana awunaso neze izinkinga. Zicabange wena, uxabana ngokushiya isikhathi nomndeni nabangane oyithandayo kakhulu. Futhi hhayi ngenxa yokuthi ngokungazelelwe bayeka uthando, kodwa ngoba ngamunye wethu ungumuntu, imibono ye-sosvoimi nemicabango, ngenxa yokuthi ukuphikisana kwezintshisekelo kungase kwenzeke. Ngakho-ke, khumbula ukuthi abantu abanothando bayaphikisana futhi bafunga ukuthi banezinkathi ezinzima, uthando lwangempela ngempela luyonke-olunqobayo. Futhi lolu thando luyabonakala, lubonakala endleleni abantu ababukeka ngayo. Kungakhathaliseki ukuthi kudlule isikhathi, amehlo abo ayashisa. Futhi abafisi ukushintsha omunye nomunye, ukuthola umuntu kangcono. Ngoba baycono kakhulu komunye nomunye. Ngaphezu kwalokho, lokhu akusho ukuthi kube okuhle kunabo bonke abanye.
Uthando lweqiniso lukhona kuleli zwe. Kukhona abantu abaningi abadumalayo abaqala ukuziphatha nabanye njengoba benza nabo. Yingakho kancane kancane emhlabeni kukhona injabulo encane nokudumazeka okwengeziwe. Futhi uma uphinde ugcwalise izibalo zabantu abanjalo, akekho ozoba ngcono. Ngakho-ke, okungenani uzitshele ukuthi uzithande wena, susa abantu ngaphandle. Futhi uma uthanda ngempela ngempela, khona-ke awukwazi ukulwa nalo mzwelo futhi uthandane nomuntu okwenza ujabule ngokuphelele.
Indlela yokubhekana nomhawu, iseluleko se-psychologist
Izinkinga zokushada kabusha
Ingabe kukhona uthando phakathi kwendoda nentombazane
Indlela yokubuyisela uthando ngobudlelwane bomndeni
Indlela yokwenza ubuhlobo bube nobuthandane
Indlela yokudala umbhangqwana ophelele
Indlela yokuqinisa uthando lomlingani?
I-Horoscope ka-2010 ngesibonakaliso se-zodiac se-Capricorn
Ukubeletha ngesikhathi sokudla
Isaladi "Grange" ngokugqoka okuneziphuzo
Indlela yokukhulisa indoda yangempela kusuka kwengane ekhula ngaphandle kobaba
Amazambane abhakabhaka anamachiza
I-Banana-i-coconut dessert ne-cashew ayisikhilimu
Ukuphuthuma ukubeka izinwele ngokuhlelekile
Indlela yokwenza izinyawo zokugaya: inqubo, ividiyo
Izinkolelo ezungeze isizungu besifazane
Izinzuzo zamanzi usawoti olwandle usawoti kubantu
Izitokisi zokucindezela: izinkomba zokusetshenziswa kanye nesimiso sesenzo
Izitshalo ezingaphandle: i-oleander
Ukuhamba ngebhayisikili ukulahlekelwa isisindo
Indlela yokunakekela isikhumba esomile
Amakhowe ama Honey for ubusika - zokupheka zokupheka ngezithombe - Okufriziwe, okuhlanjululwe ngamanzi kanye nosawoti emabhange, ukulungiselela i-caviar
Indoda ishintsha umkakhe